DFS Oo sheegtay in hub farabadan ku qabatay Dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta DFS Oo sheegtay in hub farabadan ku qabatay Dagaal ka dhacay Gobolka...
DFS Oo sheegtay in hub farabadan ku qabatay Dagaal ka dhacay Gobolka Hiiraan
Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa weli howlgal qorsheeysan kawada degaanka Ceelbacad oo hoostaga degmada buulo burde ee gobolka Hiiraan,halkaas oo shalay dagaal xoogan ay kula galeen Xubno ka tirsan Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa waxaa uu ka dambeeyay kadib markii Ciidamada dowladda ay weerareen degaanka ceelbacad, waxaana saraakiisha Ciidamada ay sheegeen in weerarkaas uu ka dambeeyay kadib markii ay ka warheleen weeraro qorsheeyeen Al-Shabaab.
Taliyaha Ciidamada qeybta 27aad ee Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Janeraal Tareedisho ayaa sheegay in dagaalkaas ay Al-Shabaab uga dileen 25 dagaalame.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in howlgalka Ciidamada ay kusoo furteen hubka noocyadiisa kala duwan oo ay lahaayeen Al-Shabaab, sidoo kalena ay jiraan khasaarooyin kale oo loo geystay Al-Shabaab.
Warrakii ugu dambeeyay ee saaka naga soo gaaraya degmooyinka Buulo-Burde iyo Jalalaqsi ee Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in inta u dhaxeysa labadaasi degmo ay Ciidamada ka wadaan howlgallo culus oo ay sheegeen in amniga lagu xaqiijinayo.